Isexwayiso kubanikazi bezimoto
Kuthiwa abaduna izimoto sebenomkhuba omusha wokuthumba abashayeli.
INKAMPANI yonogada yaseThekwini ixwayise abashayeli ngokuthi babe mehlomane ngemuva kokwanda kwezigameko zokudunwa kwezimoto kuleli dolobha nendlela entsha yabaduni yokuzama ukuthumba abashayeli ezimotweni zabo.
UMqondisi wokusebenza kwaBlue Security, uBrian Jackson, uthe inkampani ithole imibiko mayelana nezigameko ezinhlanu zokudunwa kwezimoto nezimbili zokuzama ukudunwa ngesonto eledlule.
“Kusho ukuthi kudunwa okungenani imoto eyodwa ngosuku futhi lokhu akuzifaki izigameko esingezwa ngazo. Okusikhathaza kakhulu ukuthi sekunendlela abenza ngayo lapho abaduni bezama ukuthumba abashayeli,” kusho uJackson.
Uthe abaduni baphumelele ekuthumbeni abagilwa ezigamekweni ezimbili zakamuva futhi baphinde bazama ukuthatha abashayeli kwezinye izigameko ezimbili kodwa abagilwa bakwazi ukugoloza.
Uthe abaduni bazama ukuthumba abashayeli ngoba bakholwa wukuthi bangaba nolwazi mayelana ne-tracker yemoto.
“Abaduni bacabanga ukuthi abashayeli kumele bazi ukuthi ikuphi i-tracker yemoto efakwe yinkampani yawo. Iqiniso wukuthi abashayeli kumele bangazi ukuthi i-tracker ikuphi futhi kumele bangakwazi ukusho lutho kubaduni.
“Esinye isizathu esenza abaduni bahambe nabagilwa yingoba benethemba lokudlula emshinini wemali bebaphange imali. Ngebhadi yize lesi sigameko singaba nzima kubagilwa, ezigamekweni eziningi abasolwa bagcina ngokushiya abagilwa bengenamyocu,” kusho uJackson.
Uthe izigameko eziningi zokudunwa kwezimoto zenzeka uma abagilwa sebengena emakhaya noma ngaphandle kwezindlu phakathi kuka-7 no-9.30 ebusuku.
Ukunciphisa amathuba okuthi udunwe, abashayeli kumele baqaphele uma bengena emakhaya futhi bagweme ukujikela ukungena emakhaya bengahlolanga kuqala izinto ezisolisayo noma izimoto ezibalandelayo.
Ngaphezu kwalokho, uma ulinde isango ukuthi livuleke, gcina iselula iseduze futhi ivuliwe noma ufake i-app yokucela usizo ngokushesha.
“Uma uzithola usesimweni sokudunwa, yenza okufunwa ngabaduni futhi ubabuze ngesizotha ukuthi ungawukhipha yini umndeni nezingane ngaphambi kokuthi bathathe imoto.”
Izindawo lapho izigameko zokudunwa ezibikwe khona zihlanganisa iMorningside, Glenmore, Umhlathuzana, Springfield naseBluff.